Dawlada Somaliya Oo Shaacisay Magacyada Horjoogeyaal Shabaab ah Oo ay Dishay Qaarna Gacanta ku Dhigtay | Awdalmedia.com
Dawlada Somaliya Oo Shaacisay Magacyada Horjoogeyaal Shabaab ah Oo ay Dishay Qaarna Gacanta ku Dhigtay
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhowaaqday inay howl-gal qorsheysan ku dishay horjoogeyaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, qaar kalena ay gacanta ku dhigtay.
Dowladda ayaa sheegtay in Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland ay howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanno hoos yimaada degmada Jammaame ee gobolka Jubbada Hoose.
Howl-galladaan oo ahaa kuwa Qorsheysan ayaa waxa ay ka dhaceen meel 10 KM u jirta degmada Jammaame, iyaggoona ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland oo is garabsanaya ay jiinka webiga ka galeen deegaanka Yiireey oo aan sidaa uga fogeyn degmada Jammaame, sida ay sheegtay dowladda.
“Tiro ka mid ah maleeshiyaadka Argagixisada Al-Shabaab ayaa howl-galka lagu khaarajiyay, waxaana nolosha lagu hayaa tiro badan” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay dowladda.
Sida ay sheegeen Saraakisha Ciidamada Jubbaland lix qof oo saddex ka mid ah ay ahaayeen horjoogeyaal sar-sare ah ayaa laga diley maleeshiyaadka, waxaana nolosha lagu qabtay sadddex Kale.
Sida ay dowladda sheegtay, horjoogeyaasha la qabtay ayaa lagu kala magacaabaa Cali Waraabe, Tima Jilic iyo Galley, kuwaas oo Malleeshiyaadka u qaabilsanaa Cabsi gelinta dadweynaha.
Diyaaradaha Mareykanka oo howlgalka qeyb ka ahaa ayaa duqeeyey seddex gaari oo ay Kooxda Al-Shabaab gurmad ahaan u soo direen, waxaana halkaas ku basbeelay saanad ciidan iyo raggii la socday.